Tato Daisy: fanangonana endrika sy dikany | Ny fanaovana tatoazy
Nat Cerezo | | Tatoazy voninkazo sy zavamaniry
Ny tatoazy Daisy dia safidy tena mahaliana ho an'ireo izay te-hisambotra voninkazo amin'ny vatany. Izy io dia karazan-javamaniry fantatra eran'izao tontolo izao, na amin'ny endriny na amin'ny lokony.
Izany dia noho izany, raha jerena ny lazany, nanapa-kevitra izahay ny hanokana lahatsoratra vaovao any Tatuantes ho an'ny tatoazy daisy. Mieritreritra ny hanao tatoazy daisy ve ianao? Ny zavatra ho hitantsika manaraka ireto andalana lahatsoratra ireto dia hahaliana anao, ka vakio hatrany raha te hahalala bebe kokoa!
1 Famaritana ny tatoazy daisy
1.1 Angano sy tandindon'ny daisy
1.2 Ny dikan'ny daisy araka ny lokony
2 Lakile sy hevitra ho an'ny tatoazy daisy
2.1 Daisy tena izy
2.2 Daisy miaraka amin'ny lakroa
2.3 Daisy miaraka amin'ny voninkazo hafa
2.4 Daisy tatoazy amin'ny sandry
2.5 Vehivavy misy fehiloha daisy
2.6 Daisy misy karandoha
2.7 Voninkazo tsotra
2.8 Voninkazo misy litera
2.9 Daisy eo amin'ny soroka
2.10 Daisy am-po
3 Sarin'ny Tatoazy Daisy
Famaritana ny tatoazy daisy
Ny iray amin'ireo teboka mifandraika indrindra amin'ny tatoazy daisy dia ny azy fiampangana sy dikany lalina. Na dia miresaka an'io aza isika ao lahatsoratra hafaFotoana mety indrindra hiverenana amin'ilay lohahevitra tiana holazaina hoe tatoazy daisy.
Angano sy tandindon'ny daisy
voalohany, tsy maintsy fantatsika fa io voninkazo io dia mifandray amin'ny kolotsaina taloha maro toy ny Nordic, Celtic na Roman.
Ohatra, ho an'ny Norse dia voninkazo masin'i Freya izy io, andriamanibavin'ny fitiavana sy ny fahavokarana, izany no mahatonga an'ity zavamaniry ity hanana fitiavana vehivavy. Etsy ankilany, ho an'ny Celts taloha dia manana dikany somary mampalahelo izy io, satria nino izy ireo fa rehefa maty ny zaza dia nataon'ireo andriamanitra nipoitra avy tamin'ny tany ireo daisy mba hamporisihana ireo ray aman-dreny.
Ho an'ny Romana dia misy dikany mifandraika amin'ny fahadiovana sy ny fanovana. Ny iray amin'ireo angano dia milaza fa i Vertumnus, andriamanitry ny ahitra, dia raiki-pitia tamin'i Belides, nymph tsara tarehy, izay niova ho daisy mba handosirana ny hetsik'i Vertumnus mavesatra. Izy io dia angano iray mitovy amin'ny an'i Apollo sy i Daphne, izay niova ho zavamaniry ihany koa (raha ny laurel no resahina) handositra ny mpanenjika azy.
By ny lalana ny fomban-drazana manoty ny felana daisy hijerena raha misy tia antsika na tsy manana ny fotony amin'ny matematika, satria ny daisy dia manaraka ny lamina Fibonacci ao anaty felany, noho izany ny sasany manana isa marobe ary ny hafa kosa manana isa hafahafa, miankina amin'ny iza no fidintsika. Izany no nahatonga ny daisy ho lasa mariky ny fitiavana tantaram-pitiavana.
Farany, ny voninkazo daisy dia maneho ny tsy fananan-tsiny sy fahadiovana ho an'ny Kristianisma, angamba noho ny fifangaroan'ny angano mpanompo sampy rehetra izay vao nolazainay taminao.
Raha fintinina, ary noho ireo finoana rehetra ireo, Ny tatoazy Daisy amin'ny ankapobeny dia maneho ny hatsarana, fitiavana, fahatanorana, fahasambarana ary vehivavy.
Ny dikan'ny daisy araka ny lokony
Ankehitriny, raha te hahalala ny tena dikan'ny tatoazy daisy dia tena ilaina izy io tandremo ny lokony, satria samy manana ny tandindona mifandray aminy ny tsirairay:
Daisy mena: Angovo sy fahasahisanana.
Daisy mavo: Fifaliana sy fahiratan-tsaina.
Daisy manga: Fihetseham-po sy fahatsapana fahatsapana.
Daisy fotsy: Tsy fananan-tsiny sy fahadiovana.
Lakile sy hevitra ho an'ny tatoazy daisy
Iray amin'ireo lakilen'ny tatoazy daisy - toy ny tatoazy hafa tatoazy voninkazo- azy ny fahasamihafana sy ny fahafaha-manao samihafa rehefa mamorona endrika. Azontsika atao fotsiny ny manaingo ny voninkazo daisy, zavamaniry iray manontolo na mampifangaro azy amin'ny karazana singa hafa. Ao amin'ny galeria tattoo daisy izay miaraka amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mahazo hevitra ho an'ny tatoazy manaraka ianao ary ankehitriny dia hanome anao hevitra vitsivitsy ihany koa izahay.
Daisy tena izy
Tsy misy fisalasalana ny iray amin'ireo endrika hajaina indrindra ho an'ny tatoazy daisy dia mety ho iray amin'ireo voninkazo ireo amin'ny famirapiratany rehetra, izany hoe amin'ny fomba tena izy. Afaka misafidy loko na volavola mainty sy fotsy ianao, ny zava-dehibe dia ny antsipiriany dia eritreretina farafahakeliny, ohatra, miaraka amin'ny aloka vita tsara izay manome ny halalin'ny zavamaniry.
Daisy miaraka amin'ny lakroa
Raha maniry zavatra ara-panahy sy tsotra kokoa azonao atao ianao mifidy tatoazy izay manambatra an'io voninkazo io miaraka amina sary ara-pivavahana. Raha ataonao amin'ny hazo fijaliana, toy ilay eo amin'ny sary, ohatra, ianao dia hampita ilay tandindona kristiana mifandraika amin'ny daisy (tsy fananan-tsiny sy fahadiovana).
Daisy miaraka amin'ny voninkazo hafa
Daisy afaka miasa irery, fa miaraka amin'izy ireo dia mahafinaritra ihany koa. Ankoatry ny fandefasana dikany maro samihafa (arakaraka ny voninkazo tsirairay), fomba tena misy no tena ampirisihina ary, raha misafidy loko ianao, dia misy olona mahay mifehy tsara azy ireo na mety somary mikorontana.
Daisy tatoazy amin'ny sandry
Noho ny endrik'ity voninkazo ity dia mety tsara ny sombin-tsandriny. Misafidiana famolavolana somary lehibe, toy ilay eo amin'ny sary, feno antsipiriany ary misy fiolahana manokana (mivadika ny daisy ary mena) mba hanaovany tatoazy hafa sy tany am-boalohany.
Vehivavy misy fehiloha daisy
Ho an'ireo izay maniry famoronana sary an-tsaina bebe kokoa, ny tatoazy daisy dia azo ampifangaroina amin'ny singa hafa, ohatra, vehivavy. Ny fahombiazan'ny tatoazy eo amin'ny sary dia ny fomba tena milay ary mifanaraka amin'ny lohahevitry ny tatoazy, satria nentim-paharazana izy io, ary ny mikasika ny lokon'ny voninkazo.
Daisy misy karandoha
Ary manohy ny volavola mitambatra izahay, amin'ity tranga ity, miaraka amin'ny karandoha sy raozy, roa amin'ireo singa fahita indrindra amin'ny tatoazy. Rehefa ampiarahina amin'ny margarita dia omena mikasika ilay izy ilay izy. Misy safidy hafa koa izay manomboka amin'ny lohahevitra iray ihany, ohatra, ny firavahana ny karandohany amin'ny fomba Meksikana.
Na izany aza, indraindray miasa tsara indrindra ny kilasika, ary raha jerena ny dikan'ny daisy, endrika tsotra, amin'ny mainty sy fotsy, dia afaka mampita fanetren-tena sy fahaiza-misaina. Fanampin'izay, dia toa tsara amin'ny toerana kely toa ny hato-tanana na kitrokely.
Voninkazo misy litera
Safidy iray hafa tena mahaliana amin'ny tatoazy daisy ny araraoty ny endrika volon'ilay taho hiaraka amin'ny voninkazo misy litera vitsivitsy na andian-teny izay misy dikany manokana. Ny vokatr'izany dia tatoazy marefo izay toa tsara saika na aiza na aiza.
Daisy eo amin'ny soroka
Ahoana no azonao an-tsaina Ny tatoazy voninkazo eo amin'ny soroka dia toerana mety. Ny endrik'ilay voninkazo dia tonga lafatra ary ny soroka dia hanome azy halalina kokoa, saingy azo ampifandraisina amin'ny singa hafa (voninkazo, felana) mba hananganana sombin-javatra lehibe kokoa sy mahasarika kokoa.
Farany, daisy miaraka am-po eo afovoany dia ohatra iray hafa amin'ny tandindona tantaram-pitiavana an'ity voninkazo ity. Misafidiana loko hafa ankoatry ny fotsy ho an'ny felany, toy ny amin'ny sary, mba hanomezana fihodinana voalohany ny dikan'izy ireo.
Manantena izahay fa nankafizinao ity lahatsoratra ity momba ny sary an'ohatra sy hevitra tato amin'ny daisy. Lazao aminay, manana tatoazy mitovy amin'izany ve ianao? Araka ny hevitrao, adinonay ve ny hampita dikany? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra!
Sarin'ny Tatoazy Daisy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy voninkazo sy zavamaniry » Tato Daisy: fanangonana endrika sy dikany
Tatoazy Fern, tsotra sy kanto